Hazakazaka am-bisikileta :: Hanomboka sahady ny fifantenana ireo atleta hiatrika ny Lalaon’ny Nosy • AoRaha
Hazakazaka am-bisikileta Hanomboka sahady ny fifantenana ireo atleta hiatrika ny Lalaon’ny Nosy
Hafana ny hazakazaka am-bisikileta eny amin’ny lalam-pirenena fahefatra. Handray anjara amin’ny fifaninanana karakarain’ny Ligin’Analamanga, amin’ny alahady ho avy izao, ireo atleta hofantenana hiatrika ny Lalaon’ny Nosy, hatao amin’ny 19-28 jolay any Maorisy.
“Sambany izahay no hifaninana amin’ny hetsika ataon’ny Ligin’Analamanga. Fanazarantena sady fitsapana ho an’ny atleta ihany koa ny toy izao”, hoy Relaha Jean Claude, filohan’ny Federasiona malagasin’ny taranja hazakazaka am-bisikileta.
Hisedra ny halaviran-dalana 120km ireo mpihazakazaka, izay nosafidina manokana satria io ihany no hiandry ireo atleta any amin’ny Lalaon’ny Nosy. Mpandray anjara valo amby enimpolo no efa voarakitra ao anaty lisitra hatreto. Misy ihany koa ireo solontenan’i Toliara. “Hisy ny fanomezana manokana ho an’ireo avy any amin’ny faritra hafa ka mahazo fandresena amin’ity fifaninanana ity. Ho fampirisihina ireo mpilalao eto an-toerana ihany koa no anton’izany”,araka ny fanazavan-dRavelonarivo Naly, filohan’ny Ligin’Analamanga.
Baolina lavalava – Vehivavy :: Handray ny fifaninanan’ny ranomasimbe Indianina i Madagasikara
Fifaninanana tsy ara-dalàna